Etu esi etinye Linux Mint 14 Nadia nzọụkwụ site nzọụkwụ | Site na Linux
Etu esi etinye Linux Mint 14 Nadia nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na Linux, enwere ike ịgwa gị ka ị nwaa Linux Mint: nkesa dị mfe ma dịkwa mfe iji, na mgbakwunye, nwere ụdị omume enyi na nke maara nke na-abịa na Windows.
Na nkeji ohuru a anyi kowara otu esi etinye ya Linux Mint 14 Nadia nzọụkwụ site nzọụkwụ ... ee, ka dummies.
Tupu ịwụnye Linux Mint 14, ị ga-arụ usoro 3:
download ihe ngosi Linux Mint ISO.
GRUB 2, bootloader maka Linux Mint, ga-apụta. Ahọrọ m nhọrọ ahụ Malite Linux Mint.
Ozugbo Linux Mint akpụkpọ ụkwụ, pịa akara ngosi Wụnye Mint Mint:
Ọkachamara nwụnye ga-apụta. Ihe mbụ ịhọrọ bụ asụsụ ntinye. Họrọ Español.
Kwenye na ị na-ezute opekempe nrụnye chọrọ site na ịpị Gaa n’ihu. Okwesiri ighota na nani ihe di nkpa choro bu inwe oghere disk di mkpa. Inwe njikọ Internetntanetị akwadoro mana ọ bụghị ihe achọrọ. ebe ọ bụ na ị ga-enwe ike ikwu nke nbudata nke nchịkọta maka mgbe ọ bịara gị nke ọma.
Nke a bụ akụkụ kachasị ike: disk nkewa. Lee ụzọ 2 ị ga - eso:
a) wepu sistemụ arụmọrụ ochie ma wụnye. Nke a bụ nhọrọ kachasị mfe: hichapụ ihe niile ma wụnye n'elu. Enweghị mkpa ikpo isi gị na nkewa disk ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya.
b) nkebi disk na aka.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ nke abụọ, ọkachamara na-ekekọrịta disk ga-amalite.
Nke a bụ nhọrọ. A na-atụ aro ya maka ndị ọrụ etiti ma ọ bụ ndị ọrụ dị elu maara ihe nke a pụtara. Nzọụkwụ ọ bụla na-ezighi ezi nwere ike iduga nfu data na diski. Ọ bụrụ n’ịchọghị itinye ndụ ya n’ihe egwu, emela ya.
N'ikwu okwu n'ozuzu, nkwanye m bụ ịkekọrịta diski n'ime akụkụ 3:
Mgbe ihe niile dị njikere, pịa Wụnye ugbu a. Ihe mbụ ị ga - ahọrọ oge oge:
Naanị ị ga-abanye aha njirimara na paswọọdụ, aha maka kọmputa ma chọpụta ma ọ dị mkpa ịrịọ paswọọdụ ịbanye. Site na ebe a, ọ ga-ekwe omume izobe folda nkeonwe, nke m anaghị akwado (n'ihi na ọ nwere ike belata usoro) belụsọ ma ị na-echegbu onwe gị banyere nchekwa nke akwụkwọ echekwara na igwe ahụ.
N'ikpeazụ, faịlụ faịlụ ahụ ga-amalite na ihe oyiyi ga-egosipụta na-egosi ụfọdụ uru nke Linux Mint.
N'ikpeazụ, reboot ma wepu diski / pendrive.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Etu esi etinye Linux Mint 14 Nadia nzọụkwụ site nzọụkwụ
Agbalịrị m ịwụnye LMDE 201303 na nkewa agbatịchara.Enweela m mmeri 7 na ubuntu 13.04 arụnyere. Ana m ehichapụ ubuntu kpamkpam ma mechie igwe ahụ. Naanị m nwere ike ịgbake w7 mgbe m nyochara enweghị ubuntu.
R14 © dijo
Ndewo, mgbe m kpebiri ịgbanwee gaa na linux na nkesa a enwere m nsogbu. Awụnyela m akụkụ nke aka na-esote windo 7 na 8 na mgbe ijikwa iji nwetaghachi ihe mgbochi na tutos ole na ole, mgbe ị na-ahọrọ naanị linin mit na-egosi, ọ bụghị otu windo 2 ahụ. Kedụ ka m ga-esi nweta sistemụ ochie m na - enweghị usoro? Ekele!
Zaghachi R14 ©
Ọnye na -bụ Ricardo Ariza Velez? dijo
melite grub2 na njikwa ma ị ga - edozi ihe niile
Zaghachi Ricardo Ariza Velez
Angel Molina dijo
Anọ m na-agbalị ịwụnye mint, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njedebe windo nwụnye na-emechi, na-enweghị izitere m igbe nkwụnye gwụchara, ma mgbe m malitegharịrị kọmputa ọ naghị amalite Mint, ihuenyo ahụ na-acha oji na nkuzi na-enwu, kedu ihe m ga-eme ?
Zaghachi Angel Molina
Rodrigo Frias dijo
Anọ m na-achọ ịwụnye Mint na LVM, mana ọ kụrụ m ihe, ọ wụnye ihe niile, mana ọ tụbara njehie mgbe ị na-etinye grub. You ma nke akwụkwọ ntuziaka ịwụnye mint dị ka nke a?
Zaghachi Rodrigo Frias
Ndewo, abum onye ohuru na Linux, m wunye nsụgharị nke Linux mint 14 nadia, na ọ dị mma, okwu a bụ na enweghị m ya kpamkpam na Spanish, na amaghị m otu esi eme, ma ọ bụ ihe m ga-eme iji dozie nsogbu a, eji windo nke a emeghị m , biko gwa m otu esi eme ya, daalụ n'ọdịnihu ma ana m atụ anya ịkwado enyemaka !!!!!! :)
Oburu na m chetue nke oma, ikwesiri itinye ngwungwu asusu-pack-es (na ihe ndi ozo) yana asusu-nkwado-es ma obu ihe yiri ya. Chọọ ha na njikwa ngwugwu.
Ọnye na -bụ Ricardo Fabara Camino? dijo
Ekele si Ecuador, ekele dịrị gị maka nnukwu ọrụ gị. Anọ m na-eji Redmond OS maka afọ 10. N'oge na-adịbeghị anya, amụtara m eziokwu banyere Mmemme Na-emeghe ma Na-emeghe, M na-achọ distro ziri ezi maka m; Abụ m onye mmebe na multimedia web communicator; Achọtara m ya na GNU / LinuxMint 15 Cinnammon maka kọmpụta i7 isi: 64 bits, 8GB RAM, 165GB in C (programs), 325GB in D (ọkachamara na ozi nkeonwe). Achọrọ m ịwụnye distro a dị ka buut abụọ, enyochare m weebụsaịtị gị mana amaghị m otu esi ekewa diski ahụ. Biko, enwere ike ime ya dịka nkuzi a na-egosi: https://www.youtube.com/watch?v=-kP77ULr6pk? Na-enweghị tufuo ozi na D na C. Daalụ.
Zaghachi Ricardo Fabara Camino
Kemgbe ọtụtụ afọ, anaghị m eji ihe nkwekọrịta nke debian / ubuntu mana m maara na naanị ị pịnyere sudo aptitude melite grub2 na njikwa na ọ bụ ya, mmadụ na-agbazi m ma ọ bụrụ na nke a gbanwere, mana m mere nke a mgbe m wụnyere ya na ụfọdụ mugrosoft os
DARWIN PACHECO dijo
Ekele, nhọrọ kachasị mma ịhapụ ida data ọ bụla bụ ịmalite windo nkịtị, wee pịa bọtịnụ mmalite, dee njikwa kọmputa, wee pịa njikwa diski na n'okwu gị kpọmkwem ị ga-pịa diski D wee pịa aka nri na nhọrọ belata olu, na oghere a bụ ebe ị ga-etinye linux OS ọhụrụ gị, opekata mpe 20 gb. mgbe ahụ na nke ọhụrụ a nkebi ma ọ bụ ohere efu na diski ike ị gaghị ekenye ihe ọ bụla nkebi ka i wee nwee ike ime ya mgbe ị na-ahọpụta nkebi ebe Linux Mint ga-arụnye.
Zaghachi DARWIN PACHECO
Ndewo, achọrọ m ịwụnye linux na Windows 7 PC m, ọ bụ iwu na m ga-ekewa ya?
ị nwere ike bulie ya n'elu Linux, mana ihe kachasị m mma bụ ịme nkebi, ebe ọ bụrụ na ị nweta njehie na otu sistemụ anaghị emetụta nke ọzọ; ị ga-enwekwu nchebe gị ozi nke windo 7.
Zaghachi na dav_id
Achọrọ m, na nke mbụ, ịbanye na Linux ụwa na, inwe ịwụnye ya, echere m ime ya na nkebi 250 GB na draịvụ ike m. Windowshapụ windo na nkebi ọzọ nke draịvụ ike m. nsogbu adiro? Kedụ ka m ga - esi họrọ sistemụ arụmọrụ m chọrọ ibu? daalụ,
Ndewo, achọrọ m ịwụnye windo na achọrọ m itinye Linux iji rụọ ọrụ abụọ, nsogbu m bụ na mgbe m mechara nwụnye dịka ọ na-ekwu na ọ dị, na ozugbo ọ gwụchara n'ụzọ zuru oke, mgbe m bidoghachi lap c ọ na-arapara ma gosi m modem ozi na-esonụ. njikwa : jidere mgbaàmà 15, na-emechi ma ọ dịrị ebe ahụ ma mgbe m malitegharịrị pc na aka ya na-amalite m ozugbo na windo ma anaghị amata linux, kedụ ihe m ga-eme ma ọ bụ gịnị bụ nsogbu (?
Daalụ nke ukwuu maka ntuziaka ahụ, ọ baara m uru nke ukwuu.
Enwere m ekele maka onyinye ahụ.
N'adịghị ka! Ihe obi uto!
ozi ha nyere di nma
Ezigbo mma, enwere m obi ụtọ na nke a
Abụ m onye mmụta na ihe m gụrụ banyere Linux masịrị m nke ukwuu, ọ bụ karịa m chere na sistemụ arụmọrụ dị mma. Enwere m mmasị n'isiokwu a n'ihi na akọwara ya nke ọma daalụ nke ukwuu, enwere m olile anya na ị ga-aga n'ihu na-enweta ozi ọma site na Linux.
M nwere 2 ike draịva, otu isi na otu nke abụọ, isi otu m nwere Windows 8 na nsoje na-format. Agbalịrị m ọtụtụ sistemụ ka m nwee ike bulite Linux mint mana ọ nweghị onye na-arụrụ m ọrụ: site n'otu diski ike nke abụọ ahụ ka m budatara ya na nke a wee wụnye ya mgbe emechara mgbe m na-abanye bios ma na-achọ ịpụ site na nke abụọ, ọ na-egosi na enweghị sistemụ arụmọrụ mekwara m mgbe m chọrọ ịwụnye ya na eriri USB
Linux bụ shit, enweghị ike itinye ya na pc m, nke ahụ emeghị m na windo, yabụ ha chọrọ ka mma?
Anọ m bịakwa ebe a, ihe na - eme bụ na mgbe ọ gwara m ka m bidogharịa MAC, mgbe ọ laghachiri na ihe niile ọ ga - aga nke ọma.
Ma mgbe m nyere akara nke penguuin, ngebichi ahụ na-eji oji site n’elu akara aka ekpe ya wee dịrị otu ahụ.
Gịnị ka m mehiere?
Jaime Cabrera Maya dijo
Ezigbo ozi iji webata anyị Linux. Daalụ. Aga m eji nke a wụnye Linux Mint na PC m.
Zaghachi Jaime Cabrera Maya
N'ihe banyere ọhụrụ, disk dị ọcha. Ọ ka mma ịwụnye Linux na mbụ yana Windows? Daalụ!
Mba, wụnye Windows na mbụ Linux. Ọ bụrụ na ị wụnye Windows na njedebe ọ ga-ebibi GRUB na ị ga-etinye ya ọzọ.
A chọrọ m enyemaka. Amaghị m ihe na-eme, ihe nwere ike ime.
Ana m etinye ya n'akụkụ Mac OS na oghere efu. Ma mgbe m hụrụ onwe m na nzọụkwụ 4 (Na-akwadebe ịwụnye Linux Mint) ọ na-ezute ihe ndị achọrọ, ana m enye ya ka ọ gaa n'ihu na ọ naghị eme ebe ahụ.
Biko jiri Nzukọ anyị maka nke a. 😉
Ndewonu ehihie oma
M wụnye Linux mint 17 na ihe niile na-enweghị nsogbu, ọ jụghị m ihe ọ bụla site na nkewa ma chee na ọ wụnye ya na C nkebi m, nke bụ ebe m nwere windo. Ihe bụ nsogbu bụ na ugbu a nkewa D anaghị amata m, nke bụ ebe m nwere data m niile ...
Zaghachi javier garcia
Na Mint linux m enweghị ike ịmepụta nkewa swap. Kedu ka m ga-esi mee ya? Kedu data m na-etinye?
Ndewo ibe! Daalụ maka post gị, eziokwu bụ na enwere m nsogbu ịwụnye mint lint, m na-enwetakwa 'nko' na nkebi. Enwere m draịva ike 2 nwere nkebi 3 nke ọ bụla, ugbu a m hụrụ isiokwu ahụ, aga m ehichapụ akụkụ 2 site na draịvụ ike nke abụọ wee mepụta ha ọzọ dịka ị na-ekwu itinye linux.
Ọ bụ ezie na iji kpuchido data m, m ga-ewepụ ihe mbụ draịvụ mbanye na bọọdụ tupu echichi, dịka m na-ahụ n'ebe ahụ na nkwupụta ndị otu ha na-efu data, yabụ, ọ ga-abụ n'ihi na ha na onye editọ ngalaba a na-egwu ọtụtụ.
M ga-esi na-esonụ njehie mgbe nkewa, mgbe ịpị "wụnye ugbu a": "The nkebi okpokoro usoro iji na diski gị kwesịrị kwesịrị gị ike a iche iche nkebi maka buut Loader koodu. Nkebi a kwesiri akara maka ojiji dika "EFi buut nkebi" ma kwesiri ibu 35 MB. Rịba ama na ọ bụghị otu ihe ahụ dị ka nkebi ndokwasa na / buut »
Ọ bụrụ na ịlaghachi na nkebi menu ma dozie njehie a, buut booter loader nwere ike ịda mgbe e mesịrị, ọ bụ ezie na ọ ka nwere ike ịwụnye boot booter na nkebi »
Amaghị m ihe m ga-eme.
Marty burgos dijo
Muahahahahaha !!!! (Na-achị ọchị na-achị ọchị).
O nwere nnukwu nsogbu na ngwa ngwa nke windo windo 8.1, na enweghị ikpe nke wụnye windo XP ma ọ bụ 7 ...
Echetara m na m nwere Linux Mint disk ... ma ọ bụ karịa 5 nkeji na Linux bibiri nzuzu femụwe na ugbu a na njedebe, m nwere ike iwunye Windows XP SP 3 dị ka nkewa.
Zaghachi Marty Burgos
Ndewo m na-anwa ịwụnye ubuntu 16 na / ma ọ bụ mint na pc na W7. Okwu bụ na enwere m diski abụọ, SATA na IDE, yabụ m kpebiri ịhapụ W7 na SATA, nke bụ ihe m kacha eji maka facultd na mmemme ndị ọzọ wee hapụ IDE ka ọ were Linux. Nsogbu bụ na mgbe m chọrọ ịwụnye multi buut m nwere ike ịnweta Linux (yabụ enwere m Windows kpamkpam) m lere anya ebe niile mana enweghị m ike idozi nsogbu ahụ.
PoEdit nkuzi: otu esi atụgharị asụsụ ngwanrọ ngwanrọ n'efu
ElementOS_Graphite: Isiokwu ọzọ maka Dekorator